FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PRAZSKY KRYSAVIK - ALIKA
Amalka ilay Prazsky Krysavik 4 taona
Ny Prazsky Krysarik dia voalaza fa karazana kely indrindra eto an-tany. Mivelatra ny tratra, saingy tsy lalina velively ary midina amin'ny kiho ihany ny ampahany. Manana vatana mahia sy marefo izy, izay rakotry ny hoditra manify. Somary lava sy tery ny hatoka, manohana ny lohany marefo. Tery sy amboahaolo ilay vava, misy nify mahitsy nefa feno olona. Fohy ny palitaony misy volony manify sy manelatselatra. Ny lokon'ny akanjo dia mainty sy mainty avokoa. Ny Prazky Krysarik dia 2 sm fohy kokoa ny haavony raha oharina amin'ny Miniature Pinscher amin'ny halavany farany ambany.
Kely, tena haingana, mavitrika, mailo ary mavitrika, ity karazana ity dia maneho fitiavana ny tompony ary tena mailo. Ny Prazsky Krysarik dia manana fofona maimbo. Noho ny habeny sy ny fahaizany dia nampiasaina hamonoana voalavo (krysa) izy, izay nanome azy ny anarana hoe 'Krysarik'. Ireo toetra izay ananany dia novolavolaina nandritra ny taonjato lasa. Tena sosialy izy, mpankatò ary tia olona. Mifanaraka tsara amin'ny ankizy izy. Amin'ny natiora dia mendri-kaja sy manan-tsaina izy. Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , fitondran-tena entanin'ny olombelona toerana inoan'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona . Izany dia mety hiteraka degre isan-karazany olan'ny fitondran-tena . Anarana canine amin'ny fifandraisan'olombelona dia tena zava-dehibe.
Hahavony: 7 - 9 santimetatra (19 - 22 cm)
Milanja: 2 - 6 pounds (1 - 3 kg)
bulldog anglisy mainty sy fotsy
Ireo ranjo manify dia mora tohina.
Ny Prazsky Krysarik dia mankahala ny hatsiaka ary mety hangovitra. Hilefitra izy ary hankasitraka akanjo ba mafana aza amin'ny andro mangatsiaka kokoa. Alika kely tsara ho an'ny fiainana an-trano ireto.
Na dia manintona aza ny fitondrana ireo zavaboary marefo ireo, dia alika kely mavitrika mila a mandeha isan'andro . Na dia mivoaka an-tongotra aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho olombelona. Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika izay tsy afaka mandeha amin'ny diabe isan'andro dia azo inoana fa mampiseho olana maro amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda. Aza mieritreritra fa satria kely izy dia tokony voafatotra amin'ny toerana kely.
shih tzu manga heeler mix
Ankizy 3 ka hatramin'ny 6 eo ho eo
Ny palitao malama sy fohy volo dia tokony hosokafana moramora indraindray na hamafana lamba malemy fotsiny. Zahao tsy tapaka ny sofina ary tazomy ny fantsika. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
alika omby aostraliana sy fifangaroan'ny collie sisintany
Soldom hita ivelan'ny Repoblika Tseky sy Slovakia, ny Prazsky Krysarik dia nobeazina ho alika mpiara-miasa. Ny Prazsky Krysarik dia novolavolan'ny Czechs sy ny Slovakia izay te-hamorona alika tsy mampiasa utilitarian. Raha ara-tantara dia fantatra amin'ny faritra lavitra amin'ny Repoblika Tseky sy Slovakia ity karazana antsoina hoe Prague Ratter (Prazsky Krysarik) ity. Ity alika kely ity dia matetika no hita tamin'ny fety aristokratika tao amin'ny Prague Castle. Tamin'ny tantaran'ny Repoblika Tseky sy Slovakia dia nandravaka ny kianjan'ny printsy sy ny mpanjaka Bohemia izy, ary tompon'ny eropeana hafa koa izy satria natolotry ny mpanjaka tao Bohemia azy. Taty aoriana, olom-pirenena tsotra ny tompony. Avy amin'ny tantaran'ny Prazsky Krysarik dia afaka mianatra zavatra betsaka isika, satria voatahiry ny ankamaroany. Ohatra, fantatsika fa ity karazana ity dia tena avy any Bohemia ary ny niandohany dia azo zahana hatramin'ny tantaran'ny Czechoslovakia. Tamin'ny 1980 dia natomboka tamin'ny fomba mahomby ny fiompiana ka ny Prazsky Krysarik indray dia biby fiompy ankafizina ao an-tranonay.
Ejnar the Prazsky Krysarik toy ny alika kely amin'ny 3 volana
bruxelles griffon shih tzu afangaro alika kely amidy
Ejnar the Prazsky Krysarik toy ny alika kely amin'ny 7 volana
Amalka, Prague, Repoblika Tseky
Odin the Prazsky Krysarik toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro manao lobaka
Odin the Prazsky Krysarik toy ny alika kely amin'ny 4 volana
Hijery ohatra misimisy momba ny Prazsky Krysarik
Sary Prazsky Krysarik 1
Sary Prazsky Krysarik 2
Sary Prazsky Krysarik 3
Malagasy manga gascon nanenjika alika kely amidy
mixer dog spaniel weiner
Japoney chin boston terrier mix
Zavatra bulldog Mix alika kely mpiandry ondry
alika tan lehibe manana tarehy mainty
8 volana bulldog frantsay
karazana fakana labrador samihafa